Fiantraikan'ny tany | Reef Resilience
Ny fampihenana ny fiantraikan'ny tany dia paikady lehibe hiarovana ny haran-dranomasina sy ny vondrom-piarahamonina miankina aminy. Ny fomba fampiasana ny tany araka ny tokony ho izy dia zava-dehibe amin'ny fitantanana ny toeram-pitsangatsanganana mba hiantohana ny fampihenana ny fitaterana ny antsanga, ny otrikaina ary ny loto hafa mankany amin'ny haran-dranomasina. Ny fandraisana anjara amin'ny paikadin'ny fitantanana ny rano sy ny fandrindrana ny dobo dia andraikitra lehibe ho an'ny mpitantana ny haran-dranomasina.
Ny fandaharan'asan'ny Hui O Ka Wai Ola (Association of the Living Waters) momba ny siansa momba ny kalitaon'ny rano dia mandrefy ny rano amoron-tsiraka ho an'ny loto izay mety hanimba ny haran-dranomasina sy ny fahasalaman'ny olombelona any Hawai'i. Ny santionany sy ny angon-drakitra voangona dia ampiasaina amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny fenitry ny kalitaon'ny rano sy ny drafitra fitantanana. Sary © Bill Rathfon
Ny karazana paikady lehibe azon'ny mpitantana ny haran-dranomasina mety ho tafiditra amin'ny fampihenana ny fiantraikan'ny rano amin'ny haran-dranomasina dia ahitana:
Fampihenana ny erosiation/sediment - Ny mpitantana ny haran-dranomasina dia afaka manentana ny saina momba ny fiantraikan'ny tontolo iainana an-dranomasina amin'ny antsanga tafahoatra miditra amin'ny riandrano. Misy paikady isan-karazany mba hampihenana ny erosiation na eo amin'ny toeram-pambolena sy an-tanàn-dehibe, ao anatin'izany ny famerenana ny fambolen-kazo amin'ny faritra amoron-drano, ny fandrakofam-pamokarana, ny fandrahoan-tany, ny fiompiana ahitra/fambolena mifandimby, ny fisorohana ny fihoaram-pefy, ny tadin-javamaniry, ny tatatra eny an-dalana ary ny fandrika sedimenta (dobo fipetrahana, tany mando, sns). Ny drafitra sy ny famolavolana izay mitazona ny fitondrana hydrologika voajanahary dia afaka misoroka olana maro amin'ny erosiation.
Fitantanana ny rano maloto sy ny tafiotra — Loharanon'ny fandotoana dia mety ho loharanon'ny adin-tsaina ho an'ny tontolo iainana an-dranomasina. Na dia lafo aza indraindray, dia azo atao ny fepetra ara-teknika amin'ny fampihenana ny fiantraikan'ny rano maloto sy ny tafiotra. Ny tobim-pamokarana maloto mahomby sy tantana tsara dia afaka manafoana na mamily ireo singa manimba maro ho any amin'ny fanariam-pako, raha toa kosa ny dobo fonenan'ny mponina sy ny sivana biolojika (toy ny tany mando) dia afaka mampihena be ny enta-mavesatry ny akora mampidi-doza ariana amin'ny rano tafiotra. Amin'ny toe-javatra sasany, mety hampihena ny fiantraikany eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fandotoana bebe kokoa ny fanitarana ny toerana fivoahana any ivelany na any anaty rano lalina kokoa. Raha tsy misy tolotra fitsaboana foibe, dia azo ampiana/amporisihana ny filan-kevitra sy ny tompon-trano amin'ny fitazonana ny rafitra septika sy ny fanovana ny cesspools ho rafitra septic raha azo atao. ny Bonaire raharaha fianarana dia manome ohatra iray amin'ity paikady momba ny rano ity.
Fampihenana ny akora simika avy amin'ny fambolena - Ny zezika be loatra miditra amin'ny lalan-drano dia mety hiteraka voka-dratsy eo amin'ny kalitaon'ny rano amoron-tsiraka, ary hampihena ny tombom-bolan'ny toeram-pambolena. Afaka manampy ny mpitantana ny toeram-ponenan-drano hiara-hiasa amin'ny tompon-tany ny mpiompy haran-dranomasina mba hahatakatra ny fiantraikany ara-bola sy ara-toekarena amin'ny fampiasana zezika tsy mahomby ary manome tari-dalana momba ny karazana zezika tsara indrindra sy ny teknika fampiharana. Ny mpitantana ny haran-dranomasina dia afaka manampy ny mpitantana ny toeram-pitsangatsanganana hahatakatra ny fiantraikan'ny herbicides sy pestisides isan-karazany, ny sasany amin'izy ireo dia mety hanimba ny tontolo an-dranomasina sy an-drano ary/na mety maharitra. Any amin'ny firenena maro dia misy fitsipika henjana momba ny fampiasana akora simika amin'ny fambolena izay mety hanimba ny tontolo iainana (toy ny DDT sy dieldrin), ary ny mpitantana ny haran-dranomasina dia afaka manampy amin'ny fanairana ny safidin'ny lalàna any amin'ireo firenena izay mbola mampiasa akora simika manimba.
Fifandraisana iraisam-pirenena - Ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ny mpampiasa haran-dranomasina (mpanjono, mpandraharaha ara-pizahantany, sns.) dia mahazo tombony lehibe amin'ny ezaka hampihenana ny adin-tsaina amin'ny haran-dranomasina, ary mety ho mpiara-miombon'antoka manan-danja amin'ny ezaka amin'ny fitarihana ny fanapahan-kevitry ny fitantanana ny renirano. Ny mpitantana ny haran-dranomasina dia afaka mampitombo ny fari-piadidiana hanatsarana ny fitantanana ny rano amin'ny alàlan'ny fandaharan'asa fanentanana sy fanabeazana mikendry ireo mpandray anjara amin'ny haran-dranomasina. Ny fandaharan'asa fanaraha-maso na hetsika fitantanana fandraisana anjara (toy ny andro fanadiovana tondra-drano na fandaharan'asa 'adopt-a-reef') izay mahasarika ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina dia fomba tsara iray handraisana anjara amin'ny mpandray anjara sy hamoronana fahatsapana mitantana. Ireo mpandray anjara amin'ny haran-dranomasina dia matetika mponin'ny rano ihany koa, noho izany ny fanampiana ny mponina eo an-toerana hahatakatra ny fifandraisan'ny hetsika ataon'izy ireo amin'ny tany sy ny vokatra ho an'ny vatohara dia mety ho fomba mahery vaika hampihenana ny loharanon'ny fandotoana eny an-toerana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSobrevive al Cambio Climático en el Caribe. Catálogo de Buenas Prácticas de uso del Suelo, Manejo del Paisaje y Construction en la zona Costera de Quintana Roomanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCambios en la Línea de Costa de Cabo del Este, Baja California Sur, Méxicomanokatra fisie PDF